Samabesi khabar | Samabesi khabar - पूर्वयुवराज पारसले चलाउने बाइक कुन कम्पनीको हो ? मूल्य कति हो ?
पूर्वयुवराज पारसले चलाउने बाइक कुन कम्पनीको हो ? मूल्य कति हो ?
काठमाडौं,३० साउन । पूर्वयुवराज पारस शाह बेलाबेलामा विवादमा आइरहन्छन् । पछल्लो पटक गत शुक्रबार साँझ उनी महाराजगञ्जस्थित नारायण गोपाल चोकमा मोटरसाइकल चलाउँदा ट्राफिक नियम पालना नगरेकै कारण विवादमा परे । मा’पसे हेल्मेटसमेत नलगाई मोटरसाइकल चलाएका पारसलाई ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले सोधपुछ गर्दा उनी प्रहरीमाथि नै जा’इला’गे ।
ताजा खबरबाट साभार